सीमा नाकाको सार्वजनिक शौचालयमा ताला ! | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सीमा नाकाको सार्वजनिक शौचालयमा ताला !
सीमा नाकाको सार्वजनिक शौचालयमा ताला !
किशाेर संगम दियाली
सार्वजनिक शौचालयहरु सदुपयोग हुन नसक्दा विराटनगरको भारतीय सीमा क्षेत्र ‘खुला शौच क्षेत्र’मा परिणत भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको वेवास्ताका कारण यस्तो अवस्था आएको स्थानीयको आरोप छ ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयनजिकै सार्वजनिक शौचालय त छ, तर आवश्यक परेका बेला प्रयोग गर्न पाइँदैन । शौचालय प्रयोग गर्न नपाएपछि जोगवनी सामान किन्न जाने र सो बाटो भएर आवतजावत गर्नेहरु खुला स्थानमै दिशा पिसाब गर्न बाध्य छन् । मानिसहरु भन्सार कार्यालयको भित्तामै पिसाब गरिरहकोसमेत भेटिन्छन् । नजिकै रहेको शौचालयमा भने ताला लगाइएको छ । दुर्गन्धले सीमा नाका क्षेत्र हिँडिनसक्नु छ ।
यसअघि ठेक्का लगाएर सञ्चालन गरिँदै आएको शौचालय भवन आवश्यक मर्मत अभावले जीर्ण छ । स्थानीय मोहम्मद कलाम महानगर र वडा कार्यालयको वेवास्ताका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘यहाँ दैनिक हजारौँ ओहोरदोहोर गर्छन् । भारतको जोगवनीसँग सीमा जोडिएकाले यो अति व्यस्त ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘आपत परेपछि के गर्ने ? भएको शौचालयमा पनि ताला लगाइएको छ ।’
नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरका सीमा नाकामा देखिने यो दृश्य लज्जास्पद छ ।
जोगवनी नाकाबाट हजारौँ पर्यटकसमेत आवत–जावत गर्छन् । तर, न्यूनतम आवश्यकताभित्र पर्ने शौचालयको व्यवस्थापनतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छै्रन । भएको शौचालयलाई सरसफाई गरी सामान्य खर्चमै सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि महानगरले मौन बसेकोमा स्थानीयहरुको गुनासो छ । स्थानीय राजेश गुप्ताले वडा कार्यालयसमेत ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ आरोप लगाए ।
वडा कार्यालय आफ्नो जिम्मेवारीमा नपर्ने भन्दै पन्छिने गरेको छ । वडाध्यक्ष असलम आलमले शौचायल ठेक्का र सरसफाइको काम महानगरको भएको बताए । उनले भने, ‘त्यस ठाउँमा आकाशे पुल र प्रवेशद्वार बनाउने योजना छ । त्यसैले अहिले नै महानगरले शौचायल सञ्चालनमा ध्यान नदिएको हो ।’
सर्वसाधारण र पर्यटक ओहोरदोहोर गर्ने व्यस्त सीमा नाकामा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था नभएकोप्रति स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरुले तत्कालका लागि घुम्ती शौचालय भए पनि राख्न माग गरेका छन् ।
पछिल्लाे - ६८ सेकेन्डमै १ खर्ब रुपैयाँको सामान खरिद
अघिल्लाे - सीमा अतिक्रमणको विरोधमा नेमकिपाको देशव्यापी प्रदर्शन